जन्म बार अनि कर्म र फल - यो बार जन्मिएकाले गर्नेछन् चमत्कार | News & Tech..
जन्म बार अनि कर्म र फल – यो बार जन्मिएकाले गर्नेछन् चमत्कार
September 9, 2018 October 27, 2019 - by admin -2Comments.
जन्म बार अनि कर्म र फल – यो बार जन्मिएकाले गर्नेछन् चमत्कार – लक्ष्मीको सँधै बासले हुनेछैन धनको कमी !
जन्म बार अनि कर्म र फल – यो बार जन्मिएकाले गर्नेछन् चमत्कार,, लक्ष्मीको सँधै बासले हुनेछैन धनको कमी ! थुप्रै मानिसहरुको विश्वास छ कि जन्मेको महिना, गते, समय अथवा पलले मानिसको जीवनमा प्रभाव पार्ने गर्दछ । यसका साथसाथै दिनको असर पनि जीवन र व्यक्तित्वमाथि हुने गर्दछ त्यसकारण त आजकालका मानिसहरु आफ्ना बच्चाको जन्म यो दिनमा होइन, यो दिनमा गराउनुस् भनेर डाक्टरहरुलाई आग्रह गर्ने गर्दछन् । भारतीय अंक ज्योतिष श्रीमती ज्योतिमा शर्माले बुधबार जन्मेका व्यक्तिहरुको निम्नलिखित गुणहरु बताएकी छिन्ः
बुधबार जन्मेका व्यक्तिहरु शान्त, विदुषी र बिजनेश माइन्डका हुने गर्दछन् ।
तपाईंको जीवनमा योजनाहरुको कुनै स्थान नभए पनि तपाईं निकै सुव्यवस्थित तरिकाले काम गर्न चाहनुहुन्छ ।
तपाईं सफा र स्वच्छ विचारधाराका मालिक हुनुहुन्छ ।
तपाईंलाई नयाँ–नयाँ कुराहरु जान्न निकै मन लाग्छ ।
तपाईंको कुरा गर्ने तरिका निकै प्रभावशाली छ ।
तपाईंहरु कुनै पनि कुरामा त्यति तनावमा नहुने भएका कारण तपाईंहरु जीवनमा निकै सन्तुष्ट हुन्छ ।
सकारात्मक सोच सँगै जीवनमा अघि बढ्ने तपाईंहरुले निकै सफलता हात पार्नु हुन्छ ।
तपाईंहरुलाई धेरै रिस त उठ्दैन तर एकचोटी रिसाइसकेपछि तपाईंको रिस शान्त हुन निकै समय लाग्ने गर्दछ ।
तपाईंहरु कसैलाई पनि सजिलै माफी दिनुहुन्न । कुनै पनि व्यक्ति एक पटक मननपरेमा ती व्यक्तिहरुले जे गरे पनि तपाईंलाई प्रभावित तुल्याउन सक्दैनन् ।
तपाईंहरु खर्चिलो स्वाभावको हुनुहुन्छ र आफ्नो निर्णय आफैँ लिनुहुन्छ ।
तपाईंको वैवाहिक जीवन निकै सुखी हुन्छ किनभने तपाईं आफ्नो पार्टनरको निकै हेरबिचार गर्नुहुन्छ ।
तीब्र बुद्धि हुने भएका कारण बुधबार जन्मिएका मानिसहरु प्रायः शैक्षिक क्षेत्रमा देखिन्छन् ।
यदि तपाईको घरमा आयभन्दा बढी व्यय अर्थात् खर्च भइरहेको छ, घरमा कलेश मचिरहेको छ भने बुधवारका दिन बुध ग्रहलाई पुज्नुहोस्, समस्याबाट राहत मिल्न सक्छ । किनकि तपाईको जीवनमा कुनै उपायहरुलाई अपनाएर बुध ग्रहको अशुभ प्रभावलाई हटाउँनका साथ–साथै विद्या, धन लाभ तथा व्यापारिक उन्नति र स्वास्थ्य लाभ मिल्न सक्छ । यसबाहेक बुढेसकालबाट टाढा रहनुहुन्छ, जसबाट जीवनमा नयाँ जोश भरिन्छ । अन्य केही कार्यहरु निम्न छन्
वुधबारको दिन हरियो घाँसपात बस्तु–भाउलाई खुवाउँनुहोस् ।
समलिंगीको सेवा गर्नुहोस् ।
हरियो चना भिजाएर चरा–चुरंगीलाई खुवाउँनुहोस् ।
नौ बर्षभन्दा कम उमेरको कन्याको खुट्टा धोएर उनलाई प्रणाम गरेर आशीर्वाद लिनुहोस् ।
बुधवार व्रत बस्नुहोस् ।
बुध ग्रहको अशुभतालाई शुभतामा परिवर्तन गर्न बुधवार गणेशको पूजा गर्नुहोस् ।
धनको कामनाका लागि बुधवारको दिन श्री गणेशलाई घिउ र सख्खरको भोग लागाउँनुहोस्।- साभार – गोर्खाली खबर
Previous Article ओम अस्पतालको अध्यक्षमा उद्धव पौडेल, भोला रिजाल बाहिरिए
Next Article पुदिनाको फाइदै फाइदा जानी राखे काइदा
2 Comments on “जन्म बार अनि कर्म र फल – यो बार जन्मिएकाले गर्नेछन् चमत्कार”
Pingback: क्यान्सर भन्ने बित्तिकै मृत्यु नै हो भन्ने सोच त्याग्नुहोस् : मनिषा कोइराला - Batika Tech Sansar
Pingback: पुदिनाको फाइदै फाइदा जानी राखे काइदा - News & Tech..
Copyright © 2020 News & Tech...